Virgil van Dijk oo diray fariin dhab ah, ka hor ciyaarta ugu dambeysa ee horyaalka Premier League – Gool FM
Virgil van Dijk oo diray fariin dhab ah, ka hor ciyaarta ugu dambeysa ee horyaalka Premier League
Dajiye May 11, 2019
(England) 11 Maajo 2019. Daafaca reer Holand ee Virgil van Dijk ayaa isku diyaarinaya inuu hogaamiyo qeybta dhexe ee daafaca kooxda Liverpool kulanka ugu dambeeya horyaalka Premier League xili ciyaareedkan, ay bari ku marti galin doonaan Wolverhampton garoonka Anfield.
Virgil van Dijk ayaa ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan xilli ciyaareedkan ay ku taagan tahay kooxda Liverpool, kuwaasoo si adag u muujiyay inay u dagaalami karaan ku guuleysiga horyaalka Premier League ilaa iyo kulanka ugu dambeeya, waxaasa intaas sii dheer inay goosteen tikitkooda finalka tartanka UEFA Champions League.
Iydoo uu dagaalka u dhexeyn doono kooxaha Liverpool iyo Manchester City ilaa iyo ciyaarta ugu dambeysa ee horyaalka Premier League, ayuu hadana daafaca reer Holand wali muujiyay rajada ugu dambeysa ee kooxdiisa Reds wuxuuna yiri:
“Wax walba waxay noqon karaan suurtogal, laakiin waa inaan ahaanaa kuwo macquul ah”.
“Sida Manchester City ay u ciyaareysay xilli ciyaareedka oo dhan, qof walba wuxuu hubaa inay ku guuleysan karto horyaalka Premier League shaki la’aan”.
“Laakiin marnaba ma ogaan kartid, waxa aan sameyn karno waa inaan diirada saarno inaan ka badino kooxda Wolverhampton, sababtoo ah taasi waa shaqo weyn”.
“Qof walba ayaa ka hadlayaa waxa ay sameyn karto kooxda Brighton, laakiin waa inaan horteena eegnaa oo kaliya, sababtoo ah Wolverhampton waa koox cajiib ah xilli ciyaareedkan, waxayna kulamo adag la soo ciyaareen dhamaan kooxaha waaweyn oo dhan, sidaasi darteed waa sababta ay u joogaan booska ay haada taagan yihiin”.
Muxuu aragti ahaan ka yiri Zidane qaabka ay kooxda Barcelona kaga soo hartay tartanka Champions League??
HORDHAC : Man City VS Brighton? Man City oo heysta fursad oo ay ku hanan karto markoodii labaad oi xiriir ah horyaalka Premier league